Bit By Bit - मास सहयोग - 5.4.2 PhotoCity
PhotoCity वितरण डाटा संग्रह मा डेटा गुणस्तर र नमूना समस्या solves।
यस्तो फ्लिकर र फेसबुक को रूप मा वेबसाइट मानिसहरू मित्र र परिवारका साथ तस्वीर साझेदारी गर्न सक्षम, तर तिनीहरूले पनि अन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर फोटो को विशाल भण्डारहरूमा सिर्जना गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, Agarwal et al. (2011) शहर को एक 3D पुनर्निर्माण सिर्जना गर्न रोम को 1,50,000 तस्वीर प्रयोग गरेर "एक दिन मा रोम निर्माण" यी फोटाहरू प्रयोग गर्ने प्रयासहरू। को Coliseum जस्तै पर्यटक साइटहरु लागि त्यहाँ 3D मोडेल (चित्रा 5.10) उत्पादन गर्न अनलाइन पर्याप्त तस्वीर थिए, तर यी reconstructions गुणस्तर सबैभन्दा फोटो unphotographed को भवन को भाग छोडेर नै प्रतिष्ठित दृष्टिकोण ल्याइएका भन्ने तथ्यलाई द्वारा सीमित थिए। यसबाहेक, शहर को सबै भन्दा भागहरु लागि, पर्याप्त छैन फोटो उपलब्ध थिए। त्यसैले, फोटो भण्डारहरूमा देखि फेला डाटा प्रयोग, यो सम्भव छैन रोम को सबै पुन: सिर्जना गर्न थियो। तर, के स्वयंसेवकहरु साँच्चै "एक दिन मा रोम निर्माण" गर्न आवश्यक फोटो संकलन गर्न enlisted गर्न सकिएन भने?
चित्रा 5.10: परियोजना "भवन रोम एक दिन मा" बाट 2-डी तस्बिरहरू को एक ठूलो सेट देखि Coliseum एक 3-डी पुनर्निर्माण। यो ट्यूटोरियल को फोटो लगियो जसबाट स्थानहरू प्रतिनिधित्व (Agarwal et al. 2011)
फोटो ठूलो संख्या को लक्षित संग्रह सक्षम गर्न PhotoCity, फोटो-अपलोड खेल, Kathleen Tuite र सहयोगिहरु विकास गरे। PhotoCity को एक सुन्दर पक्ष यो एक खेल-जस्तो गतिविधि मुछिएको टोली, महल, र झण्डा (चित्रा 5.11) मा फोटो-डाटा संग्रह-अपलोड को संभावित laborious कार्य बन्द छ। PhotoCity को डिजाइन पनि eBird र अन्य वितरण डाटा संग्रह परियोजनाहरू को नमूना र डाटा गुणस्तर चुनौतीहरू elegantly solves।
चित्रा 5.11: PhotoCity डाटा सङ्कलन को संभावित laborious कार्य (अर्थात्, अपलोड फोटो) फर्केर एक खेल मा यो गरिएका (Tuite et al. 2011) ।
कर्नेल विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय वाशिंगटन को: PhotoCity पहिलो दुई विश्वविद्यालय को एक 3D पुनर्निर्माण सक्षम तैनाथ थियो। प्रत्येक परिसर मा खेलाडी आफ्नो परिसर को पुनर्निर्माण मोडेल को वर्तमान स्थिति निरीक्षण सक्छ। त्यसपछि, तिनीहरूले वर्तमान मोडेल विस्तार तस्बिरहरू अपलोड गरेर अंक कमाउन सक्छ। उदाहरणका लागि, URIs लाइब्रेरी (कर्नेल मा) को हालको मोडेल धेरै patchy थियो भने, एक खेलाडी अंक यो नयाँ तस्वीर अपलोड गरेर कमाउन सक्छ। Critically, एक खेलाडी प्राप्त अपलोड गरिएका तिनीहरूले मान्य गर्न सकिन्छ भनेर विद्यमान फोटो ओभरल्याप पर्छ तस्बिर, र अंक संख्या आफ्नो फोटो वर्तमान मोडेल होइन्छ रकम आधारित छ। अन्त मा, शोधकर्ताओं दुवै कलेजहरूलाई मा भवन (चित्रा 5.12) को उच्च संकल्प 3D मोडेल बनाउन यी अपलोड फोटो प्रयोग गर्न सक्षम थिए।
चित्रा 5.12: द PhotoCity खेल सहभागीहरू द्वारा अपलोड फोटो प्रयोग भवन उच्च गुणस्तरीय 3D मोडेल बनाउन अनुसन्धानकर्ताहरूले र सहभागीहरू सक्षम (Tuite et al. 2011) ।
डेटा मान्यता र नमूना: PhotoCity को डिजाइन elegantly दुई समस्या solves। पहिलो, फोटो पालो अघिल्लो फोटो गर्न सबै फिर्ता अनुसन्धानकर्ताहरूले द्वारा अपलोड गरिएका बीउ फोटो तरिका मेल खाने थिए जो अघिल्लो फोटो विरुद्ध तिनीहरूलाई मिल्ने द्वारा मान्य थिए। प्रणाली खराब डाटा स्वीकार गर्न किनभने यो निर्मित अतिरेक को अर्को शब्दमा, मा, यो धेरै गाह्रो छ। दोस्रो, रन सिस्टम स्वाभाविक सहभागीहरू सबैभन्दा मूल्यवान्-छैन भन्दा सुविधाजनक-डाटा संकलन गर्न गाडिहरु। वास्तवमा, यहाँ खेलाडीहरू जो बहुमूल्य डाटा सङ्कलन बराबर छ, अधिक अंक कमाउन क्रममा प्रयोग वर्णन कि रणनीति केही छन् (Tuite et al. 2011) :
"दिन र केही तस्वीर ल्याइएका प्रकाश को समय लगभग [म गर्ने प्रयास]; यो खेल इन्कार रोक्न मद्दत हुनेछ। भन्यो, बादल दिन सबै भन्दा राम्रो द्वारा टाढा हुँदा किनभने कम विपरीत मेरो तस्वीर देखि ज्यामिति बाहिर खेल आंकडा मदत कुनामा सामना गर्ने थिए। "
"यो घाम थियो, म एक विशेष क्षेत्र वरिपरि हिँडिरहेका बेला आफैलाई तस्बिर लिन अनुमति मेरो क्यामेराको विरोधी-हल्लाउने सुविधाहरू उपयोग। यो मेरो फलाँगको रोक्न भएको छैन, जबकि मलाई कुरकुरा तस्बिर लिन दिनुभयो। साथै बोनस: कम मान्छे मलाई stared "!
"त्यसपछि एक सप्ताह शूटिंग मा, पेश गर्न घर आउँदै कहिलेकाहीं5gigs सम्म,5मेगापिक्सेल क्यामेरा संग एक भवन को धेरै तस्वीर लिएर थियो प्राथमिक फोटो खिच्ने रणनीति। परिसर क्षेत्र बाह्य हार्ड फोल्डरहरू मा फोटो आयोजना निर्माण, त्यसपछि भवन अनुहार अपलोड संरचना राम्रो तहगत प्रणाली प्रदान। "
सहभागीहरू यी बयान देखाउन तिनीहरू उपयुक्त प्रतिक्रिया प्रदान गर्दा, तिनीहरू अनुसन्धानकर्ताहरूले गर्न चासो डाटा सङ्कलन मा एकदम विशेषज्ञ बन्न सक्छ।
कुल मिलाएर, PhotoCity परियोजना नमूना र डाटा गुणस्तर वितरण डाटा संग्रह मा दुर्गम समस्या छैन भनेर देखाउँछ। साथै, वितरित डाटा संग्रह परियोजनाहरू यस्तो चरा हेर्दै रूपमा मान्छे पहिले देखि नै जसरी गरिरहेका छन् कि कार्यहरू, सीमित छैन भनेर देखाउँछ। सही डिजाइन, स्वयंसेवकहरु अन्य कुराहरू पनि गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।